ISOFTWARE YOKUCWANGCISWA KWEGUMBI LOKULALA ELI-10 ELISIMAHLA (LASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Isoftware yokuCwangciswa kweGumbi lokulala eli-10 eliSimahla (lasimahla kunye neNtlawulo)
Apha ngezantsi sijonga isoftware yokulala yasimahla ye-10 yasimahla kunye nehlawulelweyo ukunceda ukuyila eyona nto ibalulekileyo kwigumbi lakho.
Xa uzama ukwenza igumbi lokulala libe yinto entsha, eyahlukileyo kwaye ibonakalise ubuntu bakho, kuninzi ekucwangcisweni. Umzekelo, loluphi uhlobo lwefanitshala olufunayo kwaye ufuna ukulubeka phi? Kukho eminye imibuzo yokuphendula enjengokuba ufuna ukuba iindonga zibe ngumbala mni, kwaye loluphi uhlobo lokuhombisa ekufuneka ulusebenzise?
Kukho konke, kunokuba nzima ukujonga yonke into oyifunayo kwi-remodel. Ngamanye amaxesha, udinga uncedo oluncinci lokucwangcisa ngaphambi kokuba udibanise yonke into kunye. Kungenxa yoko le nto kukho iinkqubo ezithile zesoftware eziza kukunceda ucwangcise ubeko kwigumbi lakho lokulala elitsha. Azizizo zonke eziluncedo njengokulandelayo, nangona. Kule nqaku, siza kujonga iiprogram ze-software eziphezulu ze-10 zokudala izakhiwo zokulala ozithandayo.
Igumbi lokulala (Simahla)
Cwangcisa igumbi lakho (Simahla)
UMdali weSicwangciso soMgangatho (simahla kwaye sihlawulelwe)
IMagicplan (yasimahla ngaphandle kokuGcina kunye neNtlawulo)
Uyilo lwamaGumbi lwangaphakathi (Mahala)
Amikasa (yasimahla kunye neNtlawulo)
Uyilo lwasekhaya i-3D (inguqulelo yasimahla ngaphandle kokuGcina kunye nokuHlawula)
Izixhobo Zokucwangcisa ze-IKEA (Simahla)
Umcwangcisi weGumbi lokuBumba leBumbi (Simahla)
Umgqatswa wokuqala kuluhlu lwethu yinkonzo yasimahla ebizwa ngokuba yi-Roomstyler. Isoftware yokucwangcisa i-3D kulula ukuyisebenzisa, konke okufuneka ukwenze kukuya kwindawo kwaye ukhethe uyilo lwegumbi. Ungaseta obu bume ngokukhetha kwiiasethi zangaphambili okanye uzobe eyakho indawo.
Nje ukuba umise igumbi lakho, ungaqala ukongeza ifanitshala kwisithuba. Unako ukuvelisa ipeyinti eyahlukileyo kwiindonga zakho nakwimigangatho ngokunjalo.
Ukuba ufuna i-engile eyahlukileyo, unokuseta ikhamera ukusondeza, eqhelekileyo, okanye ebanzi. Kukwakhona uninzi lwezifundo ukuba uyabambeka. Ukusuka kwiividiyo zokufundisa ukuya kwiingcebiso zomsebenzisi, uya kuba nakho ukufumana yonke into oyifunayo ukunceda ukuphinda wenze igumbi lakho lokulala.
Indawo yeWebhusayithi: https://roomstyler.com/
I-neil lane yedayimani yokubandakanya
Bukela le vidiyo yokufundisa malunga neGumbistyler:
Sebenzisa isoftware yoMcwangcisi 5D, ungasebenzisa iwebhusayithi okanye ukhuphele usetyenziso lwabo lweselfowuni olufumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Ungayifumana le njengesixhobo sekhompyuter yakho kwivenkile ye-Mac, iVenkile yeWindows, okanye iVenkile yeapp yeAmazon.
Xa uqala, unokufumana izimvo zoyilo lwasekhaya kuMcwangcisi 5D. Ke, xa sele ukulungele ukuqala ukuyila igumbi lakho, kuya kufuneka uqale wenze igumbi lakho lamaphupha. Xa usenza oku, ungaqala ekuqaleni okanye usebenzise itemplate. Emva koko, unokongeza kwizinto ezifana nefenitshala kunye nokuhombisa. Nje ukuba ugqibile, uyakuba nefoto yokwenyani ye-3D malunga nokuba igumbi lakho liza kujongeka kanjani. Ukuba ukhetha ukujonga ubeko lwe-2D, nangona kunjalo, oku kuyafumaneka njenge
Indawo yeWebhusayithi: https://planner5d.com/
Bukela ividiyo yedemo malunga noMcwangcisi 5d:
Isiqwenga esilandelayo sesoftware esiza kujonga kuso, Cwangcisa igumbi lakho, sesinye isoftware yasimahla yokusebenzisa ukucwangcisa ikhaya lakho. Ukuqala, uya kufuna ukuzoba ubungakanani begumbi eliyilwayo. Iseti emiselweyo ligumbi elixande le-17 'nge-15' kodwa ngokurhuqa imiphetho yegumbi ungalungisa ubume kunye nobukhulu begumbi.
Ukusuka apha, ungaqala ukongeza kwifenitshala. Ukwenza izinto zibe lula, iithebhu kwicala lasekhohlo lesikrini zahlulwe ngoluphi uhlobo lwefenitshala eya kuhamba. Ke, umzekelo, unokujonga kwithebhu yegumbi lokulala ukuba ufuna ukubeka ibhedi. Nje ukuba uyenze uyilo lwegumbi lakho, ungagcina okanye uprinte isicwangciso segumbi lakho ukuba sililandele ngokwenyani.
Indawo yeWebhusayithi: http://www.planyourroom.com/
Sijonge uninzi lwezicelo zewebhu onokuzisebenzisa ukucwangcisa igumbi lakho. Olu ngeno, uMyili weSicwangciso soMgangatho, ngokukodwa usetyenziso lweselfowuni, nangona. Oku kusebenza ngokulula kumntu osebenzayo ekuhambeni. Umzekelo, unokuhlela igumbi olenzileyo ngelixa uphuma ujonge ifanitshala ukuze ufumane umbono ofanelekileyo wendlela ifanitshala eya kuhlala ngayo egumbini.
Unokusebenzisa ulungelelwaniso lwamafu ukuxhasa izicwangciso zakho zegumbi. Nangona kunjalo, oku kuhlawulelwa ukongezwa ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kuphela ngesilingo seentsuku ezi-3 ngaphambi kokuba uhlawuliswe ngale nkonzo. Imifanekiso enikezelwe ngale app inokuthunyelwa ngaphandle ekwabelwana ngayo simahla kunye neewatermark ukugcina abanye besebenza kuyilo lwelogo ngaphandle kokwenza umrhumo owongezelelweyo.
Indawo yeWebhusayithi: https://floorplancreator.net/plan/demo
IMagicplan yinkqubo ye-iOS efumaneka kuzo zombini ii-iPhones kunye nee-iPads. (Kukwakho nohlobo lwe-Android) Ikuvumela ukuba wenze isicwangciso sakho somgangatho ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya iPDF, iJPG, iDXF, iPNG, iSVG, kunye ne-CSV. Nje ukuba ube nesicwangciso somgangatho osithandayo, ungasigcina kwilifu kwiMagicplan okanye ungabelana nabanye abasebenzisi beMagicplan.
IMagicplan sisiqwengana sesoftware kuba ilungiselelwe ukusetyenziswa ngobuchule, hayi ucwangciso lwe-DIY kuphela. Ukuqala, uthatha imifanekiso yeendawo ozifunayo kwisicwangciso sakho somgangatho - kule meko, igumbi lokulala. Emva koko, uyongeza kwizinto ozifunayo njengefanitshala kunye nezinye izinto. Unokongeza izichazi kwisicwangciso sakho njengokumakisha amaxabiso efanitshala kunye namanqaku oyilo.
Indawo yeWebhusayithi: http://www.magic-plan.com/
Uhlelo lokusebenza olulandelayo luluhlu lwethu luMyili woMyili woYilo lwangaphakathi lwe-Android. Le app isimahla ukuyisebenzisa kodwa isebenzisa iintengiso ukwenza iindleko zasimahla. Ayisiyiyo le app kulula ukuyisebenzisa, iyakhawuleza! Ngalesi sicelo, unokuba negumbi lakho lamaphupha elicwangcisiweyo ngaphantsi kwemizuzu eli-10.
Ukuqala, kufuneka ufake ubungakanani begumbi lakho. Ukusuka apho, unokuyila isicwangciso somgangatho esifana nesakho kwaye ufumane ukusebenza. Into ekufuneka uyenzile kukukhetha into kwaye ucofe ukuyibeka. Ukubekwa ngokuchanekileyo ngakumbi, ungabamba kwaye urhuqe izinto. Nje ukuba ugqibile, unendlela eyi-3D yokuhamba egumbini lakho.
Unokushicilela isicwangciso sakho segumbi esigqibeleleyo ukuze abanye babone kodwa ungakhathazeki - abanakho ukuhlela isicwangciso sakho konke konke. Konke okudingayo ukuze ufumane isicwangciso sakho okanye somnye umntu sisinxibelelanisi sayo seGumbiID.
Indawo yeWebhusayithi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midasapps.roomcreator&hl=en_US
I-Amikasa ligumbi loyilo lwesoftware onokulisebenzisa kuzo zombini izixhobo ze-iOS kunye neeWindows. Ukususela kumzuzu wokukhuphela le app, ungaqala ukwenza imodeli ye-3D yegumbi lakho lamaphupha.
Ukuqalisa, ukhetha ubume begumbi lakho kwaye usete ubungakanani. Ukhetho olungagqibekanga lubuxande, bubume be-Z, ubume be-L, ubume be-T, kunye nobume be-U. Unokukhetha kwakhona i-freeshape ekuvumela ukuba uzobe isicwangciso sakho somgangatho.
Ukusuka kweli nqanaba, unokuqala ukongeza ifanitshala kwikhathalogu kwaye ungeze kwimigangatho eyahlukeneyo kunye nemibala yodonga. Nje ukuba ulugqibile uyilo lwakho, ungalugcina ukuze ulisebenzise kwixesha elizayo okanye wabelane ngalo ngemidiya yoluntu okanye nge-imeyile.
Indawo yeWebhusayithi: http://www.amikasa.com/
Isiqwenga esilandelayo sesoftware esiza kujonga kuyilo lweKhaya 3D. Le software yenziwe ukuba isetyenziswe ngabo bobabini abahlaziyi bekhaya kunye nomyili oyingcali. Nje ukuba ugqibezele imodeli yakho, unokuyalela imodeli ebonakalayo ukuba ubhekise kuyo njengoko usenza uyilo lwakho.
Le app inokusetyenziswa kuzo naziphi na ii-smartphones, iipilisi, iiPC kunye neeMacs. Ungaqala ngesicwangciso se-2D okanye se-3D kwaye uhlengahlengise ukuphakama kodonga kunye nobukhulu kunye nokwenza iikona. Xa ukhetha ifenitshala, isoftware inempahla engaphezulu kwewaka kunye namakhulu okubumba.
Indawo yeWebhusayithi: https://en.homedesign3d.net/
Idemo yevidiyo yokuqalisa ngoYilo lweKhaya 3D
I-IKEA yindawo abantu abaninzi abaya kuyo ukufumana ifenitshala yabo. Ke, yayilinyathelo lezendalo kubo ukuba bazise ezabo izixhobo zokunceda ukucwangcisa ikhaya lakho: izixhobo ze-IKEA Planner. Kukho abacwangcisi abambalwa onokukhetha kubo kubandakanya umcwangcisi wekhitshi le-3D, umcwangcisi wewadi ye-3D Pax, umcwangcisi wokugcina we-BESTA, umcwangcisi weofisi, kunye nomcwangcisi wokugcina abantwana.
Ngokuka-IKEA, ungazisebenzisa ezi zixhobo zokucwangcisa ukuzama nokuzama kwakhona izitayile kwindawo ebonakalayo enemilinganiselo efanayo nefowuni yakho. Kwisoftware yabo, unokujonga esi sicwangciso kwindawo ye-3D. Ungasigcina isicwangciso sakho, nangona kunjalo, usithumele nge-imeyile okanye usiprinte. Ngale ndlela, ungabhekisa kwesi sicwangciso njengoko usenza kwakhona ekhayeni lakho.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.ikea.com/ms/en_US/customer-service/about-our-products/planning-tools/index.html
Okokugqibela, siza kujonga isicwangciso segumbi lePottery Barn. Lo mcwangcisi wegumbi wenzelwe ukukunceda ukuba wenze kwaye ucwangcise igumbi eliphuphileyo nokuba awunguye kwaye uyile okanye uyile. Le software ikuvumela ukuba usete indawo yakho enobungakanani kunye nezinto eziyilo.
Ngokudibanisa izinto ezinjengeengcango kunye neefestile, unokuqinisekisa ukuba ayifanelani nefenitshala kuphela kodwa awuthinteli nantoni na ebalulekileyo kule nkqubo. Ukuba igumbi lakho linalo icandelo langaphandle -njenge-deck, ipatio, okanye igadi-umcwangcisi wegumbi leBottery
Iimpawu zokulungisa umhlaba ngokunjalo.
Ukongeza kwifenitshala, nangona kunjalo, unokongeza izinto ezinje ngokukhanyisa. Ngale ndlela, unokuqiniseka ukuba xa usongeza izinto ezikhanyayo, ayisebenzi kuphela ngobuhle kodwa nangokufanelekileyo. Oku kubaluleke ngakumbi kwigumbi lokulala ukuba ukhetha isibane sebhedi kuba awufuni ukukhetha isibane esikhanye kakhulu kodwa awufuni ukubeka isibane esingasokukunika ukhanyiso oludingayo.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.potterybarn.com/tips-and-ideas/room-planner-tool/
Kulungile. Siyathemba ukuba ufumene izixhobo eziluncedo ekucwangciseni uyilo lwakho lokulala. Ukufumana ezinye izimvo jonga iposti yethu malunga Isoftware yoyilo lwangaphakathi ukunceda ukuyila amanye amagumbi ekhayeni lakho.
UJenny packham amaxabiso elokhwe yomtshato
izimbo zeenwele zomtshato zeenwele ezimfutshane
imvula ngosuku lwakho lomtshato
iikowuti ezimnandi zothando kuye